अर्थतन्त्र जोगाउन छुट्टै उच्चस्तरीय समिति चाहिन्छ : अनिल शाह - Online Khabar
असार १९,२०७७ / १२ : २४
अर्थतन्त्र जोगाउन छुट्टै उच्चस्तरीय समिति चाहिन्छ : अनिल शाह
Online Khabar 2077-1-19
१९ वैशाख, काठमाडौं । देश लकडाउन भएको एक महिना नाघिसकेको छ । लकडाउनका बेला पनि बैङ्कहरु सुचारु छन् । नागरिकहरुले बैङ्क पुगेर सेवा लिन भने पाएका छैनन् । यस्तो बेला डिजिटल कारोबार गर्न केन्द्रीय बैङ्कले आग्रह गर्दै आएको छ ।
प्रविधिमा धेरै पछाडि रहेको नेपालका लागि कोभिड– १९ एउटा अवसरको रुपमा आएको नविल बैङ्कका सीईओ अनिल केसरी शाह बताउँछन् । केन्यामा चोरी र लुटपाट धेरै बढेपछि डिजिटल कारोबार बढेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा पनि कोरोनाका कारण डिजिटल कारोबार बढ्ने बताए । बैङ्किङ प्रविधिका विविध पक्षमा शाहसँग अनलाइनखबरका रोयल आचार्यले गरेको भर्चुअल संवाद :
मान्छेले बिर्सिरहेको जस्तो लाग्छ, अहिले स्वास्थ्कर्मी र सुरक्षाकर्मीहरुले राम्रो काम गरिरहनुभएको छ । म उहाँहरुलाई सलाम गर्छु ।
अहिले धेरै मान्छेहरुलाई अस्पताल नगए पनि भएको छ । तर वित्तीय संस्थामा त जानै परेको छ । पैसा त सबैलाई चाहिन्छ नै । बैङ्क–वित्तीय संस्थाहरु अनिवार्य आवश्यकता हुन् । दाल, तरकारी किन्न पैसा नभइ हुन्न । पैसाका लागि बैङ्क जानैपर्छ ।
लकडाउनका बेला सेवा दिन हामीले एउटा रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गर्यौं– यथासम्भव प्रविधि प्रयोग गर्ने । एटीएम जस्तो प्रविधि प्रयोग गर्न अप्ठेरो ठाउँमा बैङ्कको शाखा नै खोलेर सेवा दिने । परिणाम, अहिलेसम्म बैङ्कको पैसा निकाल्न नपाएको गुनासो आएको छैन । ग्राहकहरु बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले दिएको सुविधाबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ।
हो, बढेको छ । डिजिटल कारोबार गर्ने लिडिङ बैङ्कको रुपमा नविल बैङ्क छ । नविलको प्राथमिकता पनि डिजिटल बैङ्किङ छ । वर्ल्ड बैङ्क, एडीबी, आईएमएफ लगायतबाट हामीले बारम्बार सुन्न पर्थ्यो– तिमीहरुले मोबाइलबाटै कारोबार गर्ने प्रविधि किन नअपनाएको, केन्यालाई हेरन !
डाडकाँडा भएको नेपालमा पनि प्रविधि प्रयोग बढाउनुपर्ने सुझावहरु आउँथ्यो । हामीले बुझ्दा केन्यामा चोरी लुटपाट धेरै भएपछि डिजिटल कारोबार बढेको रहेछ । केन्यामा क्राइम भएजस्तै नेपालमा डिजिटल बढाउने कोरोना बनेको छ । अहिले एटीएम कार्डमात्र नभई मोबाइल बैङ्किङ, इन्टरनेट बैङ्किङ बढेको छ ।
बैङ्कहरुले प्रविधि प्रयोग बढाउन खोजेकै थिए । त्यस अनुसार ल्याएका प्रोडक्टहरु बिकेको भने थिएन । कोरोनाले यसको महत्व बढाएको छ । कोरोना पछि नेपालमा डिजिटल कारोबार बढ्छ ।
प्रविधिमा केही चुनौती हुन्छ नै । यसको अर्थ असुरक्षित भन्ने हुदैन । फेरि प्रविधि असुरक्षित भएर मेरो खाताको पैसा गयो, म खत्तम भएँ भन्ने सुनेको छैन । इन्टरनेट ह्याकिङ भएर कुनै ग्राहकले एक रुपैयाँ पनि गुमाउन परेको छैन भने असुरक्षित कसरी भन्ने ?
केही समयअघि एटिएम ह्याक गर्ने विदेशी समूह पैसा चोरेर भाग्न पाएन, पक्राउ परिहाले । त्यसलाई नै आधार मानेर नेपालमा बैङ्किङ प्रविधि असुरक्षित छ भनेर लेखेको मैले पनि पढेँ । म यहीँ प्रश्न सोध्न चाहान्छु– कुन देशमा एटीएम ह्याक हुँदाहुँदै बैङ्कले थाह पाएर ह्याक गर्ने समूहलाई नै समातेको छ ?
कति देशमा त यति मिलियन डलर लिएर भागेको खबर सुनेका छौं । तर, नेपालमा त्यस्तो भएको छैन । प्रविधिमा चुनौती हुन्छ, त्यसमा लगानी बढाउदै जानुपर्छ । कसैले चोर्न खोज्छ भन्दैमा असुरक्षित छ भन्नु ठीक होइन । चोर आएर चोर्ला कि भनेर हामी घरमा तला लगाउँछौं । ताला लगाएको घरै असुरक्षित छ भन्न त मिल्दैन नि ।
भनेपछि कोभिड– १९ प्रविधि प्रयोग बढाउने अवसर नै हो त ?